बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड | गृहपृष्ठ
Home लगानी बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड
मुख्य कार्यालय : बुद्धनगर, काठमाडौं
स्थापना : सन् १९९३
अध्यक्ष : पद्म ज्योति
सीईओ : रञ्जन लोहार
साङ्ग्रिला इनर्जी प्रालि : ६८.९५ प्रतिशत
नेपाल सरकार : ९.०९ प्रतिशत
इण्टरक्राफ्ट नेपाल : ६.०५ प्रतिशत
यूएमएन : २.७९ प्रतिशत
कर्मचारीहरू : २ प्रतिशत
एनईए : १.०६ प्रतिशत
एनआईडीसी : ०.०६ प्रतिशत
सर्वसाधारण : १० प्रतिशत
नर्वेका इञ्जीनियर बोड होफ्नको योजनाअनुसार सन् १९९६ मा यस कम्पनीको स्थापना भएको हो । तिनाउ हाइड्रोपावर प्लाण्टको निर्माणबाट नेपालमा व्यावसायिक रूपमा जलविद्युत् उत्पादन गरी नेपालीहरूलाई प्राविधिक रूपमा दक्ष बनाउने उनको सपना थियो । उक्त परियोजनका लागि उनले सन् १९६४ मा नै आफ्नो देशबाट विभिन्न सामग्री बुटवल ल्याएका थिए । यो कम्पनी हाइड्रोपावर क्षेत्रको विभिन्न किसिमका निर्माण, सञ्चालन, विकास तथा मर्मतसम्भार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो ।
यस कम्पनीले युनाइटेड मिशन टु नेपाल (यूएमएन) र नेपाल सरकार समक्ष औद्योगिक तथा प्राविधिक इन्षिटच्युटका रूपमा काम गर्ने सम्झौता गरेको छ । साथै यसले मानव संसाधनको विकास गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्राविधिक विषयमा शिक्षा दिने उद्देश्यले वुटवल प्राविधिक इन्षिटच्युट पनि सञ्चालन गरेको छ ।
यस कम्पनीले आव ०६३/६४ देखि हाइड्रोपावरको निर्माण तथा मर्मतको कार्यसमेत सञ्चालन गरेको छ । हाल यसले खुदी हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको मर्मत तथा सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कम्पनीले नेपालको हाइड्रोपावर विकासका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।
शुरूमा निजी कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको यो कम्पनी सन् १९९३ देखि पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको हो । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संस्थाले प्रदान गर्ने उत्कृष्ट एकाउण्ट्स प्रस्तुतीकरण (वार्षिक प्रतिवेदन) का लागि २०१० को पुरस्कार वास्तविक क्षेत्रको कम्पनीतर्फ यो कम्पनीले पाएको थियो ।
यो कम्पनीको १ सय ८० दिने शेयरमूल्यको ट्रेण्डलाई आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा हाल यस कम्पनीको शेयर न्यूट्रल जोनमा देखिएको छ । आरएसआई चार्टअनुसार यो कम्पनीको शेयर धेरैपटक ओभरसोल्ड जोनमा झरेर उकालो लागेको छ । गत मेको अन्तिमतिर स्केल ७० लाई छोएको यो कम्पनीको आरएसआई रेखा अहिले स्केल ५० तिर देखिएको छ । कम्पनीले वितरण गर्ने प्रतिफल घोषणा गर्ने समय भएकाले यस कम्पनीको शेयर खरीद गर्न चाहनेलाई अहिले उपयुक्त समय हो भने विक्रीकर्ताहरूले केही समय होल्ड गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
आव आव ०६७/६८ चौथो त्रैमाससम्म यो कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब १ करोड रहेको छ । अघिल्लो अवधिको तुलनामा कम्पनीको चुक्ता पूँजी लगभग १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आव ०६७/६८ को अपरिष्कृत चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार यो कम्पनीले रू. ३३ करोड ९१ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । सो रकम अघिल्लो आवको भन्दा ७ सय १ प्रतिशत धेरै हो । यसरी कम्पनीको चुक्ता पूँजीमा भएको वृद्धिभन्दा मुनाफा वृद्धि धेरै भएकाले यसका महत्त्वपूर्ण वित्तीय परिसूचकहरूमा सुधार भइरहेको छ । त्यसले गर्दा यस वर्षलगानीकर्ताहरूले प्राप्त गर्ने प्रतिफल अघिल्लो वर्षको तुलनामा उच्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कम्पनीको जगेडा कोष गत आवमा १५ दशमलव ५४ प्रतिशत वृद्धि भएर हाल रू. ७८ करोड ११ लाख पुगेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूको तुलनामा यो कम्पनीको शेयरमूल्यमा कमै उत्तारचढाव हुन्छ । साथै मुनाफादर पनि राम्रो भएकाले यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । साथै अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा यो कम्पनीको मुनाफा उच्च भएकाले लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने प्रतिफल पनि उच्च हुने सम्भावना देखिन्छ ।